Imidiya yokuncokola: Iingcebiso ezi-3 zokuNxibelelana ngcono nabaThengi bakho | Martech Zone
Eyona nto ibalulekileyo, imithombo yeendaba zentlalo yindlela-ndlela ezimbini, apho iimveliso zinokuhamba ngaphaya kokuthengisa ngokwesiko, kwaye zibandakanyeke ngokwenyani kunye nabathengi bazo ukuze bakhulise ukuthembeka ekuhambeni kwexesha. Nazi iingcebiso ezintathu inkampani yakho enokuzisebenzisa ukunxibelelana ngcono nabathengi bakho kwimidiya yoluntu.
Ingcebiso # 1: Cwangcisa iNkqubo ukuze ungaze uLuphose iSaziso
Ukuba upapasha umxholo osemgangathweni ophezulu kwiiakhawunti zakho zemidiya yoluntu kwaye ukhulisa abaphulaphuli bakho kakhulu, amathuba okuba abalandeli bakho kunye nabathengi bakho baya kunxibelelana nophawu lwakho. Lo ngumjikelo olungileyo ofuna ukuwugcina, ukuze ufumane oonozakuzaku abaza kusasaza umxholo wakho ngomlomo kwaye babe negalelo ekukhuleni kwabaphulaphuli bakho.
Indlela eqinisekisiweyo yokufezekisa oku kungokuphendula, ngokuqinisekisa ukuba uyazi kwaye uphendula ngokukhawuleza kuwo onke amagqabantshintshi, @imibhalo kunye nemiyalezo yabucala ethunyelwe kuwe. Lonke unxibelelwano lumele ithuba lokubonisa ukuba ubakhathalele kangakanani abaphulaphuli bakho, ngokubulela ingxelo ehlabayo kunye nokumamela / ukwenza izinto ngendlela ethomalalisayo.
Le yinto onokuyiphumeza ngokudibanisa iiakhawunti zakho zemidiya yoluntu kwi-hub / isoftware yakho yabathengi, usebenzisa i-imeyile epheleleyo kwaye ucofe iinkqubo zokwazisa ezinikezelwa ziintanethi ezininzi okanye usebenzisa isisombululo sokubandakanya abaphulaphuli njengeLoomly.
Kutheni le nto ibalulekileyo Ngokomgaqo wokuphindaphinda, abantu bathambekele ekuphenduleni kwisenzo esifanelekileyo ngesinye isenzo esifanelekileyo, esenza ukuba uphawu lwakho lwenze ubudlelwane obuqhubekayo kunye notshintshiselwano.
Ingcebiso # 2: Yakha uLuntu loMthengi
Ukubakho kwimidiya yoluntu kunye neeakhawunti ezifikeleleka esidlangalaleni sisiseko seqhinga eliphumelelayo lokuthengisa ngokwedijithali, njengoko lixhobisa igama lakho ukuba likhanyise kwaye libasele phezulu kwiteli yakho nabathengi abanokuba ngabathengi.
Elinye ithuba lokuthatha izinto ukuya kwinqanaba elilandelayo kukugcina ukusebenzisa amajelo eendaba ezantsi endleleni ngokwenza-kunye nokugcina-indawo evaliweyo enikezelwe kubathengi bakho abakhona, umzekelo neQela likaFacebook.
Le ndlela ikuvumela ukuba uhambe ngaphaya kobume bobuhlobo bakho kunye nabathengi kwaye ubanike ithuba lokunxibelelana nabanye abantu ababelana ngezinto ezifanayo -ukugqibela ubophele uphawu lwakho kunye / okanye imveliso ngendlela engaqhelekanga.
Ngokulandelayo, oku kukubonelela ngethuba lokuvuza awona malungu azibandakanye neqela ngezinto ezingaphathekiyo, ezinje ngokukhangela kwiqoqo elitsha, ukufikelela kwangoko kwintengiso yabucala kunye nokumema kwiminyhadala ekhethekileyo.
Kutheni le nto ibalulekileyo Ukudala imvakalelo yokuba lilungu lezibheno kwiimfuno zabantu zokuba abathengi bakho babe lilungu elamkelweyo leqela kwaye kubangele unxibelelwano lweemvakalelo phakathi kwabathengi bakho kunye negama lakho.
Icebiso # 3: Ukujonga iBrand yakho naphi na kwi-Intanethi
Okukhona ukhula, kokukhona amathuba abaxumi bakho aphakamileyo malunga nophawu lwakho kumajelo ongengawo okanye awulawulayo. Nangona kunjalo, ngenxa yokuba abathengi bengakubuzi ngqo umbuzo, oko akuthethi ukuba awufanele uwuphendule, ngakumbi malunga negama lakho.
Ngokumisela isilumkiso kwigama lakho lophawu, nokuba kungokulula (kwaye simahla) Isazisi sikaGoogle okanye ngesisombululo sepremiyamu esinjengokuThetha, uya kwaziswa ngalo lonke ixesha umntu kwi-intanethi esebenzisa igama lebrendi yakho.
Eli lithuba elikhethekileyo lokujoyina iincoko ezifanelekileyo kunye nokuhambisa ngokungaphezulu ngokubonelela ngenkxaso- okanye nokuba yingcebiso nje -phi kwaye nini kwaye nini nakubathengi abanokubakho nabasele bengakulindelanga.
Kutheni le nto ibalulekileyo Ukuziva umangalisiwe yenye yezona zinto ziqhutywa kakhulu ziimvakalelo umntu anokuzifumana. Xa unxibelelana nabathengi ngeendlela ezingalindelekanga, uphawu lwakho lonyusa iimvakalelo kunye nokwakha ukuthanda okuhle.
Isibonelelo esiKhuselekileyo soKhuphiswano kwiNkampani yakho
Kwixesha ledijithali, apho ubuninzi bokukhetha kuyinto eqhelekileyo, ukwakha uphawu olomeleleyo abantu abanokunxibelelana nalo kunye nokuchonga yinto eyimpumelelo eyimfuneko. Ukuqhagamshela okungcono kunye nabathengi bakho yindlela eya kuphuhlisa ubudlelwane bemvakalelo, ukwakha ukuthembana kunye nokwandisa ukuthembeka. Olu lolunye lotyalo-mali olugqwesileyo inkampani yakho olunokulwenza.
Ngenxa yendalo yendalo, imidiya yoluntu yindawo efanelekileyo yokuqala. Ukuseta inkqubo yokuhlala uphendula kunxibelelwano lwabaphulaphuli bakho, ukwakha uluntu olukhethekileyo kunye olunomvuzo kubathengi bakho abakhoyo kunye nokubeka iliso kwi-brand yakho ngaphandle kweendlela zakho ezizezona zintathu iindlela onokuthi uziqwalasele.
tags: uluntu lwabathengiumthengi weendaba zosasazoimithombo yeendaba zentlalo ukumamelaimpendulo kwimidiya yoluntu